BBC Somali - Warar - BBC waxay aragtay taakulo mucaaradka Suuriya
BBC waxay aragtay taakulo mucaaradka Suuriya
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 9 Oktoobar, 2012, 02:46 GMT 05:46 SGA
Ciidanka Mucaaradka Suuriya
Sanaadiiq ka timid warshad hubka samaysa, oo loo diray waddanka Sacuudiga ayaa lagu arkay film laga qaaday saldhig ay isticmaalaan dagaalyahannada mucaaradka ee magaalada Xalab.
Mucaaradku waxay weydiisanayeen kaalmo dibadda uga timaad tan iyo markii uu dagaalku bilawday. Mucaaradka oo ku hubaysan hubka fudud oo keliya waxaa aad uga xoog badiyay ciidammada dowladda. Hubkooda badankiisa waxay ka qaateen saldhigyo ciidammada oo ay cagta mariyeen ama waxay ka iibsadeen dad hubka ka ganacsada oo jooga waddammada ay deriska yihiin.
Hase ahaatee waxaa kaloo la rumaysan yahay inay helayaan hub iyo rasaas badan oo ay ka bixiyaan ka taageerayaal waddammada khaliijka.
hal saldhig oo mucaaradku leeyahay waxaan ku aragnay saddex saxaaradood oo alwaax ah oo ay ku dheggan yihiin calaamado muujinaya in waxyaabaha ku jira ay samaysay sharikad hubka ee dalka Ukraine loona diray ciidammada Boqortooyada Sacuudiga.
Nalooma oggolaan inaan aragno waxa gudaha saxaaradaha ku jira, mana garanayno sababta halkaas loo geeyay. Laakiin waxay si cad u muujinaysaa in cid joogta khaliijka ay haatan si firfircoon u caawinayso kuwa iskudeyaya inay afgembiyaan madaxweyne Assad.
Iyagoo si gaar ah kuula hadlaya shakhsiyaad ka tirsan mucaaradku waxay kuu xaqiijinayaan inay taageero xaddidan ka helaan dalalka Sacuudiga iyo Qadar.
Xaqiiqadu waxay tahay in labada dhinacba u muuqdaan inay kaalmo ka helayeen dibadda sidii dad badani ka cabsi qabeenna, Suuriya waxay noqotay meel dagaal awood kala jiidasho uu ku dhexmarayo waddammada Carabta, Iran iyo dowlado deegaankaas ka fog, taa oo halis dhab ah u keenaysa gobol aan xasilloonayn.